သီတဂူစတားလေ့လာရေးမှတ်တမ်း (၄) ~ သီတဂူစတား
Monday, October 19, 2009 သီတဂူစတား (sitagustar) No comments
ကျောင်းသားအားလုံး နံနက်စာ စားအပြီး ဒေ၀ါလီပါတီ မစမီ ဟိုနားဒီနားလျှောက်ကြည့်ကြသည်၊ တချို့လဲစကားတွေပြောကြသည်၊ တစ်ဆောင်တည်းမှာ အတူနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့ သိပ်မရင်းနှီးကြ၊ မေးထူးခေါ်ပြောရုံလောက်သာရှိသည်။ ယခုအခါ တစ်ခရီးတည်းအတူသွားလာရသောအခါ ပိုပြီးရင်းနှီးလာသည်၊ စကားတွေလဲများများပြောဖြစ်သည်၊ အထူးသဖြင့်မတူတဲ့နိုင်ငံ ၊လူမျိုး၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာတွေနှင့်လာပြီး ပေါင်ဖက်မိသောအခါ အထူးအဆန်းလေးတွေ ဖြစ်လာသည်၊ အာဖရိကတိုက ကညာနိုင်ငံ ကညာအမျိုးသမီးနှစ်ယောက် သီတဂူစတားနှင့် ထိုင်းဘုန်းတော်ကြီးကို လာမိတ်ဆက်သည်၊ အထူးသဖြင့်ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ချင်သည်၊ သီတဂူစတားအား မေးခွန်းများစမေးပါတော့သည်၊ ဘယ်နိုင်ငံကလဲ------ မေးတော့ သီတဂူစတားက I am from Myanmar လို့ပြောတော့ နားမလည်၊ နောက်တစ်ခါ ပြောင်းပြီး ဖြေရသည်၊ I am from Burma ဟု ဖြေလိုက်မှ နားလည်သွားသည်၊ သီတဂူစတားတို့ အဲဒီအတွေ့အကြုံတော့ ကောင်းကောင်းရ နေပြီးဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုမေးပြန်သည်၊ In your country do all of the people usually wear this dress? မင်းတို့နိုင်ငံကလူတွေအားလုံ ဒီလိုအ၀တ်ကို ၀တ်ကြတာလားဟု သင်္ကန်းကို လက်နှင့်ကိုင်ပြီးမေးပါသည်၊ No, this dress is for only monks. All lay people usually use dress as you wear. မဟုတ်ပါဘူး၊ လူတိုင်းမ၀တ်ပါဘူး၊ ဒီအ၀တ်ဟာ ရဟန်းတော်တွေ အတွက်သာဖြစ်ပါတယ်၊ သာမန်လူဝတ်ကြောင်တွေက မင်းတို့လို ၀တ်ကြပါတယ်။ Because I amaBuddhist monk, I usually wear this dress. ငါက ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်တစ်ပါးဖြစ်လို့ ဒီအ၀တ်ကိုဝတ်ရတာပါ။ သီတဂူစတားက ကျွန်ုပ်က ရဟန်းတစ်ပါးဟုပြောလိုက်သောအခါ ပိုစိတ်ဝင်းစားဟန်တူသည်၊ If so, what do monks do? အဲလိုဆိုရင် ရဟန်းတွေက ဘာလုပ်သလဲတဲ့၊ All of Monk have two duties namely, learning and teaching. I not only learn but also teach other people. တို့ရဟန်းတွေဆိုတာ အဓိကအားဖြင့် တာဝန် နှစ်ရက်ရှိတယ်၊ ၁-ကိုယ်ကိုတိုင်သင်ယူခြင်းနှင့် ၂-သူတပါးတွေအား ပြန်လည် သင်ပေးခြင်း ဟောပြောခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ Oh!—Good! ဟုပြောကာ ခေါင်းငြိမ့်နေပါသည်။
နောက်မေးခွန်း= On diwali (dipawali), we are praying under God. He knows what we need. ငါတို့က God ထာဝရဘုရားဆီမှာ ဆုတောင်းတယ်၊အသနားခံတယ်၊ သူက ဒို့ဆုတောင်းတာကို နားလည်တယ်၊ သနားတယ်၊ ဒါကြောင့် လောကကြီးကိုဖန်တီးပေးတယ်။ What do you pray under God? သူဆိုလိုတာက မင်းတို့ ထာဝရဘုရားထံကနေ ဘာဆုတွေတောင်းသလဲပေါ့။ But Buddhism does not accept the existence of God. ဒါပေမဲ့ တို့ဗုဒ္ဓဘာသာက ထာဝရဘုရားရှိတယ်ဆိုတာကို လက်မခံဘူး။ ဘာလို့ဆိုတော့ ငါဥပမာပြောမယ်၊ Ok! I will explain you why Buddhism rejects the existence of God. I am going to ask youaquestion, now you have collectedalot of knowledge before you come here. Why have you got this much knowledge? မင်းကို မေးခွန်းတစ်ခုပြန်မေးမယ် ဥပမာကွာ မင်းအခု ဒီမလာခင်ကနှင့်စာရင် ဗဟုသုတတွေ အများကြီးရနေပြီ၊ အဲဒီဗဟုသုတတွေ ဘယ်လိုရလဲ။ Yes, I have hard study to get this knowledge. ငါကြိုးစားလို့ရတာပေါ့။ အဲလိုဆိုတော့ သီတဂူစတားရဲ့ လမ်းကြောင်းထဲဝင်လာပြီး၊ if so, is your knowledge not given by God? ဒါဆိုရင် မင်းရဲ့အသိဥာဏ်တွေက ထာဝရဘုရားကပေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟု ပြန်မေးလိုက်သောအခါ တွေဝေသွားသည်။ မင်းရဲ့အသိဥာဏ်တွေဟာ ထာဝရဘုရားကပေးတာမဟုတ်ပါဘူး မင်းကိုယ်တိုင်ကြိုးစားလို့ရတာပါ၊ မင်းမလုပ်ဘဲနေရင် ဘာမှရလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ဆက်ပြီး သီတဂူစတားက နမူနာတစ်ခုနှင့်ရှင်းပြလိုက်စဉ် ပန်းခြံလေ့လာဘို့ ခေါင်းဆောင်ကခေါ်သောအခါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မင်းနဲ့စကားပြောလို့ကောင်းတယ်၊ နောက်အချိန်ရရင် မင်းနဲ့ထက်ဆွေးနွေးချင် ပါသေးတယ်ဟုပြောသွားကာ စကားဆက်ပြတ်သွားပါသည်။ သီတဂူစတားလဲ နောက်တစ်ကြိမ် သူနဲ့ဆွေးနွေးဘို့ မျော်လင့်ပါသည်၊ ကိုယ်ကိုတိုင်လဲ အင်္ဂလိပ်စကားပြောဖြစ်သည်၊ ဒီမလာခင်က ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးကို ကိုယ်ကိုတိုင်အမေးခံပြီး ကိုယ်ကိုတိုင် တစ်ခါမှ မဖြေကြားခဲ့ဘူးပါ။ ဆွေးနွေးခြင်းသည် အသိဥာဏ်ကို ကျယ်ပြန့်စေသည်၊ အတွေးအခေါ် ပိုမိုရင့်လာစေပါသည်။ သီတဂူစတားသည် အိန္ဒိယရောက်မှ နိုင်ငံခြားသားများ အမေးခံရဖူးတာ (၄)ကြိမ်လောက်ရှိပြီ။ အိန္ဒယလူမျိုး၊ အီရန်အမျိုသမီး ၂ယောက်၊ အာဖရိကတိုက် ကညာကနိုင်ငံ အမျိုးသမီး၂ ယောက်နှင့် ကိုရီးယားက ကျောင်းသားတစ်ယောက်တို့ ဖြစ်သည်။ ကိုရီးယားဘုန်းတော်ကြီးနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံက ဘုန်းတော်ကြီးတို့နှင့်တော့ မကြာမကြာ ဘာသာရေးအကြောင်းနှင့်ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု သူ့ယဉ်ကျေးမှု အကြောင်းတို့ကို ဆွေးနွေးဖူးပါသည်။ တကယ်တော့ သီတဂူစတားသည် အလွန်စကားနဲသူ တစ်ယောက်ပါ၊ အဟောအပြောကလဲ မကောင်းတော့ စင်ပေါ်မတက်နိုင်ခဲ့ဘူးသေး၊ သို့သော် မေးလာလျင်တော့ အနဲအကျဉ်းတော့ ထွက်လာပါတယ်။ အနည်းငယ်သော သီတဂူစတားရဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေပါ။
Posted in: ခရီးသွားမှတ်တမ်း Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
သီတဂူစတား ဓမ္မဒူတမှတ်တမ်း အပိုင်း (၃)
ဆုတောင်း ၆မျိုး (အပိုင်း-၃)
ဆုတောင်း ၆ မျိုး (အပိုင်း-၂)
၀ါကျွတ်ပွဲတော်ကို မူဆလင်များ တိုက်ခိုက်သဖြင့် ဗုဒ္ဓ...
ပြောမယုံ ကြုံဖူးမှသိ ရင်နာမိပါ၏...
သီတဂူစတား ဓမ္မဒူတမှတ်တမ်း (အပိုင်း-၁)
သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဉာဏိဿရ (သို့မဟုတ်) စာဆိုတော်ဓမ္မက...
သီတဂူစတားရဲ့ သီတင်းကျွတ် ဆုတောင်း
ကောင်းမွန် ဓမ္မဒူတမှတ်တမ်း (အပိုင်း-၉)
ကောင်းမွန် ဓမ္မဒူတခရီးမှတ်တမ်း (အပိုင်း-၇)
ကောင်းမွန် ဓမ္မဒူတခရီးမှတ်တမ်း (အပိုင်း-၆)
ကောင်းမွန် ဓမ္မဒူတခရီးမှတ်တမ်း( အပိုင်း-၅)
ကောင်းမွန် ဓမ္မဒူတခရီးသွားမှတ်တမ်း (အပိုင်း-၃)